ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ခရမ်းရောင်လွင်ပြင်
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:17 PM
Waing September 27, 2009 at 11:30 PM
ရှေးဟောင်းကားလေးတစ်ကားပဲ အချိန်ရရင် တစ်ကားလုံးကြည့်လိုက်ဦးမယ် အခုလို ကြိုးစားပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းပေးထားတာတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကြည့်သင့်တဲ့ ကားဟောင်းလေးပါ။
အနော် September 28, 2009 at 12:14 AM
လင့်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အကိုချမ်းလင်းနေရေ
အဲ့ဒီကားလေး ကြည့်ချင်တာ အစအဆုံး ရှာမတွေ့လို့
ရေတမာ September 28, 2009 at 5:21 AM
အရင်က ကိုညီလင်းဆက် ဖော်ပြထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်
လင်းကြယ်ဖြူ September 28, 2009 at 8:35 AM
ကျွန်တော်ကတော့ ကို ချမ်း ဆီကနေကြည့်ပြီးပြီ..
မချစ်ရ September 28, 2009 at 10:48 AM
Wuthering Heights က
Unknown September 28, 2009 at 1:03 PM
ဒါက မူလအစ Wuthering Heights ကားပါ။ U tube ထဲကနေ ကြည့်လို့ရအောင်ပါ။
မိုးစက်အိမ် September 28, 2009 at 1:41 PM
ကျေးဇူးဘဲ အစ်ကိုရေ အဲဒီကားအကြောင်းကိုစာတော.
ရှင်းပြ ပေးထားတာရော ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရော တင်ပေးတဲ.
အတွက်ပါ ကျေးဇူး အစ်ကိုရေ ...
စိတ်၏ဖြေရာ September 28, 2009 at 3:38 PM
desertraindrops September 29, 2009 at 5:20 PM
ကိုချမ်းရေ အခုလို မျှဝေထားတာ ကျေးဇူးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ကြားပဲကြားဖူးတာ မကြည့်ဖူးဘူး။ အခုတော့ ကျေးဇူးနော့။ ပိတ်ရက်မှ လာကြည့်မယ်။
Angel Shaper September 29, 2009 at 7:10 PM
မပြန်ခင်ကြည့်သွားဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါ ဘကြီးချမ်းရေ...
Anonymous October 1, 2009 at 12:49 AM
ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မှာပါ.. ဝေငှတဲ့အတွက် ကျေးဇူး..
Wuthering Heights link အတွက်လည်း ထပ်ကျေးဇူးတင်၏
peter kyaw October 3, 2009 at 11:41 AM
အပေါင်းနဲ့ ပြည့် စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါ
အခွင့် ရယင်တော့လေထန်ကုန်း ဇတ်ကားလေး ကူးချင်ပါတယ်...
ကိုယ် အရူးအမူးစွဲလန်းခဲ့ ရတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပေါ့ ....
jr.lwinoo October 4, 2009 at 2:13 AM
အဲကား သိတာတော့ကြာဘီ။ ကြိုကြားကြိုကြားကြည့်ဖူးတယ်။ အဲအမျိုးသမီးက အင်္ဂလိပ်စာတော်တော်ကောင်းတဲ့ အပြင် ကျက်သရေရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့။
ကျေးဇူးပါဗျာ.... သိတောင် မသိဘူး.. အခုလိုဖော်ပြပေးတာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
စိမ်း... October 4, 2009 at 11:53 PM
ဖြိုးငယ် October 6, 2009 at 4:34 PM
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ .. ဒီနေ့ ဒီကိုရောက်လာရတာ တန်သွားပြီ ...
ကိုလူထွေး October 10, 2009 at 7:54 AM
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုချမ်းရေ...
leomark December 8, 2009 at 10:49 PM
မကြည့်ရသေးဘူး..နောက်ရက်မှ လာကြည့်မယ်ချစ်ကိုကြီးရေ..
Cameron December 30, 2009 at 4:25 AM
အမကရုပ်ရှင်သိပ်ကြိုက်တာ ဒီလိုဂန္ဓ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးကို သိမ်းထားချင်ပါတယ်...အရမ်းလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်..
ဒါပေမယ့် utube က ဒီမှာကြည့်လို့ရဘူး...